China Checking Fixtures orinasa sy mpanamboatra | Dongtai
Inona ilay fijerena fanamarinana? Fitaovana fanamafisana kalitao ampiasaina hanamarinana ny mampiavaka ireo entana sarotra. Ampiasaina be izy io amin'ny famokarana motera automatique izay mandinika ireo tapany vita amin'ny vatan'ny metaly vita amin'ny taratasy mba hahazoana antoka tsara fa raikitra daholo ny fiara rehetra.
Ny fijerena fiakarana dia tafiditra indrindra amin'ny fanamarinana ny vokatra farany na nahafa-po izany rehetra izany ny fepetra mifanaraka amin'ny fenitra. Izy io dia manome fitaovana malefaka ary noho izany dia hanana fiovana sy fikapohana amin'ny alalan'ny fampifangaroana ireo vokatra. Noresahinay ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ity fampitaovana mitazona ity ary avereno hatrany ny famakiana!
•Ny karazany samihafa fisavana kitay
Topazo maso ireo karazana fijerena fiovana, izay manampy anao hahatakatra ity fampitaovana mitazona ity.
• lisitry ny CMM
Izy io dia ahitana ny fanamboarana sy ny singa afovoany, izay ahafahana mahita ny anjara ao amin'ny habaka manokana ary koa mifehy izany amin'ny alàlan'ny milina CMM.
• Famonoana olona
Maneho ny tontolo iainan'ny fivoriambe na ny ampahany azo fehezina ary simulate ny singa mifandraika amin'izany, izay manodidina ny faritra. Ity karazana fampifangaroana ity dia misy lafiny fanitsiana sy singa mifototra. Izy io koa dia manana fifehezana amin'ny alàlan'ny fitaovana fandrefesana sy ny Go / No Go.
• Hamarino fiakarana miaraka amin'ny fifehezana dizitaly dizitaly ary Go / No Go
Ity karazana fampifangaroana ity dia misy fanitsiana sy singa mifototra amin'ny ampahany ary manana fifehezana amin'ny manual amin'ny fandrefesana fitaovana na Go / No Go hanolotra sanda nomerika marina noho ny sandan'ny nominalina. Tafiditra ao ny probe nomerika, ny mpanondro dial, tsy feno, sy ny sisa.
• Fanamboarana automatique
Toy ny karazana fiatra hafa, dia manana singa sy fanamboarana azy izy io saingy miaraka amina fanaraha-maso automatique mba hahazoana ilay ora fohy kokoa ho an'ny fikojakojana sy fifehezana ny 100 isan-jaton'ny famokarana.
Fampiharana amin'ny fanamarinana fixtures
Ianao ve mieritreritra ny fomba fanamarinana fixturesnampiasaina tamin'ny sehatry ny fiara sy ny sehatra hafa? Raha eny, dia vakio ireo zavatra voalaza ato amin'ny fizarana etsy ambany.
Ny fanamarinana fixtures dia natao manokana ho an'ny famerenam-bolo, ny mahitsy ary ny fahatokisana miaraka amin'ny fifantohana mafy amin'ny ergonomika an'ny operator.
Manao fifaneraserana amin'ny mpanamboatra sy ny mpamatsy tolotra manamarina fiomanana sy fivoriambe ho an'ny tranon'ny fiara ary koa ny fivorian'ny vatana
Io fampitana io dia azo alaina amin'ny karazan-javamaniry vita amin'ny metaly sy plastika toy ny fametahana anatiny, tombo-baravarana, singa vita amin'ny chassis, akora, takelaka zavamaneno, sns.
Previous: Momba ny tsindrona
Manaraka: Fanaka vy vita amin'ny vy